ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးဌာန|ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း e-commerce သတင်း
Encarni Arcoya | 25/04/2022 09:05 | စတိုးဆိုင်
သင့်တွင် eCommerce တစ်ခုရှိသည့်အခါ အချို့သော အသုံးအနှုန်းများကို နေ့တိုင်း လက်တွေ့ကျကျ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရမည်ဖြစ်သောကြောင့် နှလုံးသားဖြင့် သိထားရမည်ဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့် သင်က အခုမှစလုပ်တော့မယ်ဆိုရင် တစ်ယောက်ယောက်က သင့်လမ်းကို လျှောက်လာနေတာကို တွေ့နိုင်ပါတယ်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ... ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစင်တာဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။
အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်နှင့် ပတ်သက်၍ မရှင်းလင်းပါက သို့မဟုတ် ၎င်းသည် သင်နှင့် ကိုက်ညီမှု ရှိ၊ မရှိ မသိပါက၊ ဤစကားလုံးပါ၀င်သည့်အရာအားလုံးကို ရှင်းလင်းအောင် ကျွန်ုပ်တို့ကူညီပေးပါမည်။.
1 ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးဌာနဆိုတာ ဘာလဲ။
2 ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစင်တာတွင် မည်သည့်လုပ်ဆောင်ချက်များ ရှိပါသလဲ။
3 ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစင်တာ အမျိုးအစားများ
4 ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစင်တာတစ်ခုရှိဖို့ စိတ်ဝင်စားပါသလား။
ပထမဦးဆုံး ပြည့်စုံစွာနားလည်ထားရမည့်အချက်မှာ ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစင်တာတစ်ခု၏ ဆိုလိုရင်းဖြစ်သည်။ ထိုအကြောင်းသည် ဖြစ်၏။ သိုလှောင်မှု၊ အဖွဲ့အစည်းနှင့် ကိစ္စများစွာတွင် ထုတ်ကုန်များ ဖြန့်ဖြူးရာနေရာ ဘာရောင်းတာလဲ။.
ဥပမာတစ်ခုယူကြည့်ရအောင်။ Amazon ကို မြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ ကုန်ပစ္စည်းတွေအများကြီးရှိတဲ့ ဆိုင်ကြီးတစ်ခုပါ။ ၎င်းတို့အများစုမှာ ပြင်ပကုမ္ပဏီရောင်းချသူများမှ ဖြစ်ကြသော်လည်း အခြားသူများမှာ ကုမ္ပဏီမှ တိုက်ရိုက်စီမံခန့်ခွဲပြီး ၎င်းတို့၏ စတော့ရှယ်ယာများကို သိမ်းဆည်းရန် နေရာတစ်ခု လိုအပ်ပါသည်။ ဒါပေမယ့်လည်း သူတို့ကို ဘယ်နေရာမှာ စုစည်းပြီး ဖြန့်ဝေမလဲ။ တစ်နည်းဆိုရသော် ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုကို မှာကြားလျှင် ဘယ်မှာလဲဆိုတာ သိပြီး ပို့ပေးဖို့ ပြင်ဆင်ပါ။.
သင့်တွင် eCommerce တစ်ခုရှိလျှင် သင့်တွင် ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစင်တာရှိရန် လိုအပ်သည်ဟု မဆိုလိုပါ၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၎င်းတို့အများစုမှာ ကုမ္ပဏီကြီးလွန်းသဖြင့် ၎င်း၏ထုတ်ကုန်အားလုံးကို သိုလှောင်ခြင်း သို့မဟုတ် ဖြန့်ဝေခြင်းမပြုနိုင်သည့်အခါတွင် ၎င်းတို့အများစုကို ဖွဲ့စည်းထားသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့် အဲဒါအမှန်ပါပဲ။ အစပိုင်းတွင်၊ eCommerce တစ်ခုရှိ ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစင်တာတိုင်းသည် သင့်အိမ်ဖြစ်သည်။. သို့မဟုတ် သင့်တွင် ကုန်ပစ္စည်းများရှိသည့် ဂိုဒေါင်။
ကြီးထွားလာသည်နှင့်အမျှ ၎င်းသည် သေးငယ်လာပြီး နေရာပို၍ လိုအပ်လာသည်။ ထိုနေရာအသစ်သည် သိုလှောင်မှု၊ အဖွဲ့အစည်းနှင့် ဖြန့်ဖြူးရေးစင်တာဟု ယူဆထားသည့်အရာဖြစ်သည်။
ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစင်တာတွင် မည်သည့်လုပ်ဆောင်ချက်များ ရှိပါသလဲ။
သင့်အား ယခင်က ကျွန်ုပ်တို့ပြောခဲ့သည့်အတိုင်း၊ လုပ်ဆောင်ချက်များသည် ကျွန်ုပ်တို့ရည်ညွှန်းထားသော အရာများဖြစ်ကြသည်- စတိုးဆိုင်၊ စုစည်းခြင်းနှင့် ဖြန့်ဝေခြင်းဟု ထင်မြင်ခြင်းသည် ပုံမှန်ပင်ဖြစ်သည်။ သို့သော် လက်တွေ့တွင် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့် လုပ်ဆောင်ချက်များမှာ-
လှုပ်ရှားမှုများကို ဗဟိုချုပ်ကိုင်ပါ။. အောက်ပါတို့ကို စဉ်းစားကြည့်ပါ- သင်သည် ထုတ်ကုန်နှစ်ခုအတွက် မှာယူမှုတစ်ခုရရှိမည်ဖြစ်သည်။ သင့်တွင် ဂိုဒေါင် A တွင်တစ်ခုရှိပြီး အခြားတစ်ခုသည် ယခင်တစ်ခုနှင့် 15 ကီလိုမီတာအကွာတွင်ရှိသော ဂိုဒေါင် B တွင်ရှိသည်။ ဆိုလိုတာက နှစ်ခုလုံးကို စုဆောင်းပြီး အချိန်ဖြုန်းရမယ်လို့ ဆိုလိုတာပါ။ ယခု သင့်တွင် ၎င်းတို့ရှိနေပြီဖြစ်သော်လည်း ကီလိုမီတာ 30 အကွာတွင်ရှိသော အိမ်တွင် အမှာစာများကို ပြင်ဆင်ထားကြောင်း ထွက်ပေါ်လာသည်။ အိမ်ပြန်ရမှာ၊ ပြင်ဆင်ပြီးမှ လာဖို့ ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်တိုင်လာယူဖို့ မက်ဆေ့ချ် တောင်းလိုက်တာနဲ့ အချိန်ကုန်သွားတယ်။
အရာရာကို ဗဟိုချုပ်ကိုင်ခြင်းဖြင့် မင်းရဲ့ဂိုဒေါင်၊ မင်းရဲ့အမှာစာပြင်ဆင်မှုအပိုင်းနဲ့ မင်းရဲ့စာပို့သူရှိမယ်။ ထိုနေ့အတွက် အော်ဒါများအားလုံးကို စုဆောင်းရန် အသင့်ဖြစ်နေပါပြီ။ ဒီနည်းက ပိုလွယ်မှာမဟုတ်ဘူးလား။
စတော့ကို စောင့်ကြည့်ပါ။. အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သင်သည် ပစ္စည်းစာရင်းကောင်းကောင်းမဆောင်ထားလျှင် အကြိမ်များစွာ သင်တကယ်မရှိသော ကုန်ပစ္စည်းများကို ရောင်းချနိုင်ပြီး၊ ထို့နောက် ပြန်ရရန်အပြင် တစ်ခါတစ်ရံတွင် သင့်အတွက် ငွေကုန်ကြေးကျလည်း များနိုင်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။
အချိန်ကို ပိုကောင်းအောင် စီမံပါ။. ဤနည်းအားဖြင့် သင်သည် ဖောက်သည်များအတွက် ပုံကောင်းတစ်ပုံဖြစ်စေသည့် သတ်မှတ်ရက်များကို တွေ့ဆုံရန် သို့မဟုတ် ၎င်းတို့မတိုင်မီပင် ဖြစ်လိမ့်မည်။
ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစင်တာတွင် များစွာသော လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်မှု မရှိပါ။ ၎င်းတို့သည် စတိုးဆိုင်တစ်ခု၏ အဖွဲ့အစည်းအတွက် ရည်ရွယ်သည့် နေရာများဖြစ်သည်။ အွန်လိုင်း သို့မဟုတ် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစတိုးဆိုင်မှလည်း (စတိုးဆိုင်များတွင် ပျောက်ဆုံးနေသော ထုတ်ကုန်များကို ပိုမိုလွယ်ကူစွာ ဖြန့်ဖြူးနိုင်သောကြောင့်)။ သို့သော် အမျိုးအစားငါးမျိုးရှိကြောင်း သင်သိပါသလား။
ဟုတ်ပါတယ်၊ သူတို့တစ်ခုစီမှာ သင့်လုပ်ငန်းအတွက် ပိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ ထူးခြားတဲ့လက္ခဏာတွေရှိပါတယ်။ ငါတို့က မင်းကို ရှင်းပြတယ်။
အတိုကောက်အားဖြင့်လည်း လူသိများသည်။ CIM၎င်းသည် မြို့စွန်၊ မြို့များအနီးတွင် အမြဲလိုလိုတည်ရှိသော အချက်အချာဖြစ်သည်။ မလှမ်းမကမ်းကြောင့်၊ ၎င်းတို့သည် ဖောက်သည်များထံ ၎င်းတို့ရရှိထားသော ကုန်ပစ္စည်းများကို ဖြန့်ဖြူးပေးရန် တာဝန်ရှိသည်။. ဒါပေမယ့် သူတို့သာမက ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများနှင့် အခြား "ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ" ချန်နယ်များသို့လည်း သူတို့ ထုတ်ကုန်တွေကို ရောင်းနိုင်တယ်။
ဥပမာ- ဆံပင်အလှပြင်ပစ္စည်းကုမ္ပဏီ။ သင်သည် ဖောက်သည်များထံ ရောင်းချနိုင်သော်လည်း တစ်ချိန်တည်းတွင် သင့်ထုတ်ကုန်များကို ဝန်ဆောင်မှုပေးရန်အတွက် ဆံပင်အလှပြင်ဆိုင်များစွာနှင့် သဘောတူညီမှုရနိုင်သည်။
ဤအမည်ဖြင့် လူသိများသော်လည်း၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဗဟို၊ သို့မဟုတ် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး node
ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ၎င်းသည်ဗဟိုနှင့်အတူ အတော်လေးကြီးမားတဲ့ extension ကို နှင့် ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတို့နှင့် ပတ်သက်သည်။. သူတို့ရောင်းတဲ့ ကုန်ပစ္စည်းတွေကို ဖြန့်ဖြူးဖို့ ကုမ္ပဏီရဲ့ ထရပ်ကားတွေကို တင်ဆောင်ပြီး တင်တဲ့ နေရာလို့ ပြောလို့ရပါတယ်။
ဤထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစင်တာအမျိုးအစားသည် လူသိများပြီး ဝေါဟာရ၏အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်နီးပါးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ထုတ်ကုန်များကို ထုတ်လုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် ပြောင်းလဲခြင်းမပြုဘဲ အစားစားပြုလုပ်သည့်နေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထုတ်ကုန်များ၏ သိုလှောင်မှုနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုအဖြစ် ဆောင်ရွက်သည်။.
၎င်းသည် ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးပလပ်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း သင့်အား ကျွန်ုပ်တို့ပြောနိုင်သည်။ ဒါပေမယ့် နောက်ထပ် ခြားနားချက်တစ်ခု ရှိပါသေးတယ်။ သူ့အထဲမှာလည်း ဒါပဲလေ။ ထုတ်ကုန်များ ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်/သို့မဟုတ် ပြောင်းလဲခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ပါသည်။ ၎င်းသည် နောက်ပိုင်းတွင် စီမံခန့်ခွဲရန်နှင့် ပေးပို့ရန် polygon ၏ အခြားအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုသို့ ကူးသွားသည်။
ZAL ဟုလူသိများသောဤစင်တာသည်ဆိပ်ကမ်းဧရိယာများနှင့်တည်ရှိသည်။ ၎င်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ရေကြောင်း၊ ကုန်းကြောင်း သို့မဟုတ် လေကြောင်းဖြင့် ဆောင်ရွက်သော ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး ထိန်းချုပ်မှု ဖြစ်သည်။.
ကဲ ဟုတ်တယ်၊ မေးစရာကြီး။ ကျွန်ုပ်၏လုပ်ငန်းအတွက် ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစင်တာတစ်ခု ရှိသင့်ပါသလား။ ငါ့ကို လိုက်ဖက်လား?
အဖြေက ထင်သလောက်မလွယ်ဘူး။ အကယ်၍ သင်သည် ကုန်ပစ္စည်းများစွာကို စတင်ရောင်းချသော်လည်း သင့်တွင် သိသာထင်ရှားသောစတော့များရှိနေပါက၊ အမှာစာများရောက်ရှိလာချိန်တွင် ၎င်းတို့ကို သိုလှောင်နိုင်သည့် ဂိုဒေါင်ကို ငှားရမ်းရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဒါတွေက နည်းနေတယ်ဆိုရင် အဲဒါတွေကို စီမံခန့်ခွဲရတာ ပြဿနာမရှိပေမယ့် အများကြီးရှိရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ လူများကို ငှားရမ်းခြင်းအပြင် ဘေးအန္တရယ်အကင်းဆုံးအချက်မှာ သင်ရောင်းချနေသော ထုတ်ကုန်များကို အစားထိုးရန်နှင့် သင်ပိုမိုချဲ့ထွင်နိုင်စေရန် လိုအပ်ပါသည်။
ဒါဆို ဟုတ်ကဲ့ အချိန်ကျလာမှာပါ၊ သင့်ဖောက်သည်များအတွက် အတတ်နိုင်ဆုံး ထိရောက်မှုရှိရန် ထိုထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစင်တာကို သင်လိုအပ်ပါသည်။. သို့သော် ထိုသို့ပြုလုပ်ရန် ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသော အချိန်မရှိပါ။ အချို့သော စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်များသည် ယင်းကို စတင်လုပ်ဆောင်ပြီးဖြစ်သည်။ တခြားသူတွေကတော့ သူတို့ရဲ့ လုပ်ငန်းကို တိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့ နှစ်ပေါင်းများစွာ အချိန်ယူရပါတယ်။
အရေးကြီးတာက ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစင်တာဆိုတာ ဘာလဲ၊ တစ်ခုနဲ့တစ်ခု လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့ ရှိနေတဲ့ အမျိုးအစားတွေကို သင်သိဖို့ပါပဲ။ သင်လိုအပ်သည်ဖြစ်စေ မလိုအပ်သည်ဖြစ်စေ သင့်လုပ်ငန်းနှင့် သင်ရရှိလာသောရလဒ်များကို ပြောပြလိမ့်မည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ECommerce သတင်း » ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး » စတိုးဆိုင် » ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးဌာနဆိုတာ ဘာလဲ။